Azimisele ukulwa kuze kube sekupheleni awaseKZN | News24
Azimisele ukulwa kuze kube sekupheleni awaseKZN
Maritzburg United striker Evans Rusike is a player the club is pinning hopes on to save the team from relegation. PHOTO: sourced
AMAQEMBU aKwaZulu-Natal adlala kwiPremier Soccer League (PSL) iLamontville Golden Arrows neMaritzburg United athi azimisele ukudlala kuze kuse emnyango futhi adlalele ukufa nokuphila ukuze aqede esendaweni ephephile kwiligi.
Abafana Bes’thende, iLamontville Golden Arrows isalokhu izame ngayoyonke indlela ukungena emaqenjini okuqala esishiyagalombili (top 8). Nokho kuyacaca ukuthi ukungena eKhanana noma kwi-Top 8 kusalokhu kuwumnqansa kuma-Arrows. Phela Abafana baseLaxie basalokhu belele ishumi nanye (11th position). Selokhu iqalile isizini basawine imidlalo eyisishiyagalombili. Imidlalo yonke esebeyiluzile iyishumi nanye, badlala amadilo ayisithupha, kanti amagoli asebangenele awu-31. Esewonke amaphuzu asebewaqoqile angamashumi amathathu (30).
Umqeqeshi waBafana Bes’thende uClinton Larsen uthi akathandi ukuthi abadlali babe sengcindezeni kodwa bona baphokophele ukuqeda endaweni ehloniphekile. Lo mqeqeshi uthi cishe bonke abaqeqeshi bamaqembu ake azibone ukuthi asbenze kahle noma ngokugculisayo uma bekwazile ukungena kwi-Top 8.
“Thina sifuna ukuzama ukudlala kahle siwine nemidlalo esisalele ukuze siqede endaweni egculisayo,” kusho uLarsen.
Ngalo Mgqibelo, i-Arrows izobe ihanjelwe yi-Free State Stars eChatsworth Stadium (3pm).
Kanti iTeam of Choice isalokhu izabalazile, izama ukusuka emsileni. Uma singayibali imidlalo edlale phakathi nesonto, i-United nayo ibisadlale imidlalo engamashumi amabili nanhlanu. Selokhu yaqala isizini bebesawine imidlalo emithathu vo! Okubuye kuthuse ukuthi iqembu leMaritzburg United selingenelwe amagoli amaningi kunawowonke amaqembu akuPSL, phela esewonke amagoli asebangenele awu-50. Amadilo asebawadlalili awu 8, kwase kuthi asebeluzile awu-14.
Okhulumela leli qembu laseMphithi uBrian Zuma uthi akusadlalwa kodwa sekulwela ukufa nokuphila futhi bazoshaya kwasani oluphambi kwabo ngoba bafuna ukubalekela izembe.“Asisho ukuthi kuzoba lula kodwa sizimisele ukuqoqa amaphuzu agcwele kuyoyonke imidlalo esisalele. Phela akekho ofuna ukuya ehlathini.”
NgoLwesihlanu lwakusasa i-United izobheka neSuperSport United eHarry Gwala Stadium (8pm).
Maritzburg United ne SuperSport United eHarry
Gwala Stadium ngo-8pm
Golden Arrows ne Free State Stars eChatsworth Stadium ngo-3pm, Polokwane City ne Black Aces e-Old Peter Mokaba Stadium ngo-3pm, Wits ne Chippa United eBidvest Stadium ngo-6pm, Mamelodi Sundowns ne Kaizer Chiefs eLoftus Stadium ngo-8:15pm